नातिनी भेट्न अष्ट्रेलिया आएका हजुरबुवा मस्तिष्कघातले ढले, अचेत अवस्थामा उपचार हुदै । « Nepal Tube Australia
Sat, January 22, 2022 | शनिबार, माघ ८, २०७८
गृहपृष्ठ » Australia » नातिनी भेट्न अष्ट्रेलिया आएका हजुरबुवा मस्तिष्कघातले ढले, अचेत अवस्थामा उपचार हुदै ।
नातिनी भेट्न अष्ट्रेलिया आएका हजुरबुवा मस्तिष्कघातले ढले, अचेत अवस्थामा उपचार हुदै ।
एक सातादेखि अचेत, आईसियुमा उपचार
सरल गुरुङ Published On : 27 April, 2020
आफ्ना छोराबुहारी र नातिनी भेट्न अष्ट्रेलिया आएका एक अभिभावक मस्तिष्कघात (ब्रेनह्यामरेज) भएर अचेत भएका छन् । उनको व्रिजवेनको प्रिन्सेस एलक्जेन्ड्रा (पिए)अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ ।
विकास बस्नेतका ६० वर्षिय बुवालाई मस्तिष्कघात भएको हो । अप्रिल १८ तारिखमा अचानक मस्तिष्कघात भएपछि विकासले बुवालाई लोगान अस्पताल भर्न गरेका थिए । त्यहा उपचार संभव नभएपछि भोलीपल्ट उनलाई पिए अस्पताल रिफर गरिएको हो । एक सातादेखि अचेत अवस्थामा रहेका उनको सघन कक्ष (आईसियु )मा उपचार भईरहेको छ ।
टाउकोमा रक्तश्राव अत्याधिक भएकाले उपचारमा केही कठिनाई आएको छ । आफै रगत सुक्न दिने वा शल्यक्रिया गर्ने भन्नेमा चिकित्सकहरुले छलफल गरिरहेको छोरा विकासले नेपालट्युबलाई बताउनुभयो । सुरुको दिनमा भन्दा अहिले बुवाको अवस्थामा सुधार आईरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । एक महिना जति आईसियुमै राखेर निगरानी गर्न समेत डाक्टरले सुझाव दिएका छन् ।
हालसम्म दुबै अस्पतालमा गरेर ४० हजार डलरभन्दा बढी खर्च भईसकेको छ । आईसियुको समय लम्बिए अस्पतालको बिल लाखौ डलरभन्दा माथी पुग्न सक्छ ।
भिजिटर भिषामा आएकाले बुवाको ईन्सोरेन्स गरिएको विकासले जानकारी दिनुभयो । तर, यसअघि लोगान अस्पताल ईन्सोरेन्स क्लेम गर्दा स्विकृत नभएपछि विकास अलि अत्तालिएका छन् । मंगलबार फेरि सबै बिल समेटेर ईन्सोरेन्समा निवेदन दिने उहाँको भनाई छ । ईन्सोरेन्सले खर्च व्यहोरेन भने के गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् विकास यतिबेला ।
सोमबार व्रिजवेनका केही नेपाली अगुवाले भेटेर विकासलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा साथ दिएका छन् ।
विकास श्रीमती र सानी छोरीसहित नर्दन टेरिटोरीमा बस्थे । त्यहि नातिनीको अनुहार हेर्न ६ महिना अघि विकासको वुवा अष्ट्रेलिया आउनुभएको हो । रिजनल स्किल माईग्रेसनका लागि दुई वर्ष त्यहा बसेर उनी हालैमात्र ब्रिजवेनको लोगानमा काम गर्न आएका हुन् । विकासको अझै पनि पिआर भईसकेको छैन । नयाँ ठाउ, त्यसमाथी कोरोनाका कारणले श्रीमतीले समेत काम नपाएकाले विकास थप चिन्तामा छन् । अस्पतालको शैयामा ढलेका बुवाको उपचार हरसंभव गराउन जुटेका विकासले हिम्मत भने हारेका छैनन् ।
क्याटेगोरी : Australia, Breaking News, Health-lifestyle, News
अष्ट्रेलियामा घट्दै कोरोना संक्रमण, प्रतिबन्ध नगरि नियन्त्रणमा लिने सरकारी रणनीति
ब्रिजबेन, अष्ट्रेलिया । दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या ८० हजार माथी
भिटिज भिसामा खाडी मुलुक र मलेसिया जान प्रतिबन्ध
काठमाडौं। नेपालबाट भिटिज भिसामा खाडी मुलुक जान रोक लगाइएको छ
अब विद्यार्थी र भिषावाला बिना क्वारेन्टिन कुईन्सल्याण्ड आउन पाउने
ब्रिजवेन/अब दुबै खोप लगाएका विद्यार्थी र भिषावाहक पनि बिना क्वारेन्टिन
अबैद्य क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न तीन जना काठमाडौंबाट पक्राउ !
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको नीति नियम विपरित अबैद्य क्रिप्टो करेन्सीमा
Nepal Tube Australia
Welcome to Nepaltube
NEPALTUBE is your leading web destination for news and information dedicated to diverse storytelling and immersive original content while promoting community harmony and preserving diversity in the Australian Nepalese community.
ABN : 84 642 381 173
News : 0420397147
ईमेल : saralnews9@gmail.com
Editor (Australia)- Saral Gurung
Editor (Nepal ) – Punya Prashad Dhamala
Editor (South Asia) – Sarala thapa
Cameraperson- Prakash Adhikari
Cameraperson- Jitendra Neupane
Advisor Editor- Bharat Raj Paudel
Presenter - Manila Subedi
Find Us on Social Media :
© 2022 Nepal Tube Australia - Nepal Tube Australia. All Rights Reserved.
By : RD